Mari-nehupfumi, 15 Chivabvu 2019
Chitatu 15 Chivabvu 2019
Chivabvu 15, 2019
VaNcube Vanoudzwa Kuti Vanhu Havachina Chivimbo Navo
Dzimwe nhengo dzeparamende dzaudza gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, kuti veruzhinji havachavimba navo munyaya dzehupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari gore rapera zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo.
Varimi Vachena Votarisirwa Kutanga Kuripwa neHurumende Svondo Rinouya
Mukuru weCommercial Farmers Union VaBen Gilpin vanoti vari kutarisira kuti kutanga vhiki rinouya, varimi vachena mazana masere nemakumi matanhatu vanenge votanga kupihwa mari dzekubatsirikana semuripo pamapurazi avakatorerwa nehurumende.
Hurumunde Youkurudzira Varairidzi Kuti Vasaramwe Mabasa
Asi mutungamiri weARTUZ, VaObert Masaraure, vaudza Studio7 kuti havasi kuzodzokera kumashure nehurongwa hwavo kudzamara hurumende yazadzisa zvido zvavo.
Amai Khupe Vosarudza VaMadhuku Kuti Vavamirire seGweta paNyaya yeKunetsana naVaChamisa
Bato rinotungamirwa naDoctor Thokozani Khupe reMDC-T radoma Muzvinafundo Lovemore Madhuku kuti vave gweta raro panyaya yavari kunetsana neMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa yehutungamiri hwebato reMDC.
Hurumende Yovimbisa Kugadzikana Mune zveMafuta Panguva iyo Magetsi ave Kunetsa muNyika
Gurukota rezvemhando dzemoto, Doctor Joram Gumbo, vanoti zvinhu zvagadzikana munyaya dzemafuta edzimotokari zvichitevera kuibva kwemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica yakapiwa makambani anopinza mafuta munyika.
Chivabvu 12, 2019
Bato raVaChamisa Roita Musangano kuLupane
Bato rinopikisa reMDC rinoti riri kuenderera mberi nezvirongwa zvaro kunyangwe dare repamusoro rakapa mutongo wekuti mutungamiri waro VaNelson Chamisa vainge vasarudzwa zvisizvo pavakatanga kuitwa mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri pamwe naVaElias Mudzuri
Chirera Nherera Gogo Gwanzura Vorangarirwa neVamwe paZuva raVanaAmai
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyemura nekutenda mabasa anoitwa nevanamai kana kuti Mother’s Day
ARTUZ Yozivisa Hurumende Kuti Ichakanda Mapadza Ayo Pasi
Sangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, rinoti razivisa hurumende kuti inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvaro mukati memazuva gumi nemana, kutadza kwayo, ropinda mukuramwa mabasa.
Kucherwa kweMatombo kuDomboshava Kounza Mutauro Mukuru
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanonzi vaudza bazi rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti kucherwa kwematombo kuDomboshava kotanga here kana kuti kwete.
Mafuta eDzimotokari Oramba Achinetsa, Hurumende Ichiti Nyika Haina Dambudziko
Asi gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe, Doctor John Mangudya, vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuAmerica kuburikidza ne avanoti ma letters of credit, yekutenga mafuta.